linear Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး - တရုတ် Qingdao Aedis အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
ကြီးမားသော POWERFLOW လေကြောင်းဂျက်လေယာဉ်များနှင့်အတူ FlowCon လေထုပျံ့ applications များ၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကလေကောင်းလေ entrapping နှင့်ရောစပ်မှာအလွန်ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ လေထုဂျက်လေယာဉ်၏တာရှည်ပစ်ထိရောက်စွာကြမ်းပြင်ဒေသများ Cooler မှအပူလေကြောင်းကျု့ံနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဂျက်လေယာဉ်၏ဒြပ်ထုနှင့်အလျင်တို့သည်ပျံ့ ကျော်လွန်. '' ဝေဟင်စောင်ရေ 10'-40 ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ တစ်မိတ်ကပ်လေကြောင်းယူနစ်မှချိတ်ဆက်နေတဲ့ FlowCon POWERFLOW ပျံ့နှင့်တကွ, ဝင်လာသောလေကောင်းလေကြီးမားတဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းဧရိယာကျော်အညီအမျှလူစုခွဲနိုင်ပါတယ်။ စွမ်းအင်ချွေတာရန် unheated လေကြောင်းဆောင်းရာသီတွင်ပူနွေးသောမျက်နှာကျက်လေနှင့်အတူရောနှောဖို့အထက်သို့ညွှန်ကြားပြီးတော့နွေရာသီအတွက်အလုပ်ဒေသများလေခတ်ဖို့အောက်ဖက် redirected နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးကပန်ကာနှင့် FlowCon POWERFLOW ပျံ့ရိုးရိုးအေးကြမ်းပြင်လေနှင့်အတူရောနှောဖို့အောက်ဖက်နွေးမျက်နှာကျက်လေကောင်းလေမှုတ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ စွမ်းအင်ချွေတာသိသိသာသာရှိနိုင်ပါသည်။ ပူပြင်းတဲ့အလုပ် enviroments မှာ, ရိုးရှင်းလေကောင်းလေစောင်ရေကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ အကြီးစား POWERFLOW လေကြောင်းဂျက်လေယာဉ်ဗျူဟာမြောက်တစ်ဦးချင်းစီအလုပ်ဘူတာလေခတ်ဖို့ပျံ့တလျှောက်နေရာယူထားနိုင်ပါသည်။ PowerFlow ထည်လေကြောင်းပြွန်အငွေ့ကြီးမားသောဆိပ်ကမ်းများမှတစ်ဆင့်အောက်ဖက်လေထုအအေးကယ်နှုတ်တော်မူ။ PowerFlow လေကြောင်းဂျက်လေယာဉ်အချင်းရှိ "မှ 6" 1 ကနေအထိ။ လျှောက်လွှာအကြံပြုချက်များပါဝင်သည်; စက်မှုဇုန်, သိုလှောင်ခြင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဒေသများ, gyms, ပူးစ်, လက်လီ, ကုန်စုံစတိုးဆိုင်နှင့်ယာယီအဆောက်အဦများ။
10 အောင်စ။ polyester coated ဗီနိုင်းအမြင့်အပူချိန် Poly ပိုက်လုံးpolyester - မွှား polyethylene
Cable ကို Halo ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား HD ကိုရထား
အကြံပြု Applications ကို
ကုန်စုံစတိုး gyms စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာကုန်ထုတ်လုပ်မှုဒေသများ ်ပူး
ယာယီ structures များ
လေတပ်ဂျက်ကိုမဆိုဆက်သွယ် ငွေ့ရည်ဖွဲ့ယိုစီး ကြိုးများအထည်အလိပ် Damper Draw Fittings ပြည်တွင်းအဆုံး Cap
ဇစ်နဲ့ Velcro Connections ကို
polyethylene အများဆုံးဓာတုပစ္စည်းမှဒဏ်ခံဖြစ်ပြီးအများဆုံးလေကြောင်းဘွားအမှုန်မှတက်မတ်တပ်ရပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ 180 ° F ကိုတစ်အရည်ပျော်အပူချိန်ရှိပြီးတစ်မှုန်ရေမွှားရေပိုက် nozzle နဲ့ဖြီးနေဖြင့်သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ polyethylene မီးနှောင့်နှေးသည်နှင့် ASTM, E-84 အတန်းအစား 1, AC အ 167 နှင့်တွေ့ဆုံ, LC 1005. ICC က-ES သတင်းပို့: ESR-2646 ။
300: D polyester
polyester တစ်ဦးပရီမီယံတန်း coated ထည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 350 ° F ကိုတစ်အရည်ပျော်အပူချိန်ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍများအတွက် laundered နိုင်ပါသည်။ polyester မီးနှောင့်နှေး ASTM, E-84 အတန်းအစား 1, AC အ 167 နှင့်တွေ့ဆုံ, LC 1005. ICC က-ES သတင်းပို့သည်: ESR-2646 ။
သာ * အထူးအမိန့်။
polyester တစ်ခုမွှားအေးဂျင့်နှင့်အတူပရီမီယံတန်း uncoated ထည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 350 ° F ကိုတစ်အရည်ပျော်အပူချိန်ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍများအတွက် laundered နိုင်ပါသည်။ polyester ASTM, E-84 အတန်းအစား 1 တွေ့ဆုံနှင့် ul အားဖြင့်ခွဲခြားခြင်း, မီးနှောင့်နှေးပါတယ်။
10 အောင်စ။ polyester coated ဗီနိုင်း
ဗီနိုင်းအများဆုံးလေကြောင်းဘွားအမှုန်မှတက်မတ်တပ်ရပ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ကုတ်အင်္ကျီအထည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 180 ° F ကိုတစ်အရည်ပျော်အပူချိန်ရှိပြီးတစ်မှုန်ရေမွှားရေပိုက် nozzle နဲ့ဖြီးနေဖြင့်သန့်စင်စေနိုင်ပါတယ်။ ဗီနိုင်းမီးနှောင့်နှေးသည်နှင့် ASTM, E-84 အတန်းအစား 1 တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
XStatic တစ်ခုမွှားအေးဂျင့် features ကြောင့် anti-ငြိမ်ကုတ်အင်္ကျီအထည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 250 ° F ကိုတစ်အရည်ပျော်အပူချိန်ရှိပြီးသေးငယ်တဲ့ကဏ္ဍများအတွက် laundered နိုင်ပါသည်။ XStatic မီးနှောင့်နှေးသည်နှင့် ASTM, E-84 အတန်းအစား 1 တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
အမြင့် Temp ဖန်မျှင်ထည်
မြင့်မား Temp ဖန်မျှင်ထည် 500 ° F ကိုတစ်အရည်ပျော်အပူချိန်တပ်ဆင်ထားတဲ့အင်္ကျီကိုဖိုက်ဘာမှန်ထည်ဖြစ်ပါတယ်။ တခြား applications များပြုလုပ်ရာတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာမှန်အင်္ကျီဖြစ်ပြီးလေထုဂျက်လေယာဉ်များရှိနိုင်ပါသည်။ အမြင့် Temp ဖိုက်ဘာမှန် ASTM, E-84 အတန်းအစား 1 တွေ့ဆုံနှင့် ul အားဖြင့်ခွဲခြားခြင်း, မီးနှောင့်နှေးပါတယ်။
က) Cable ကို:
တင်းမာမှု cable ကိုအများဆုံးချွေ option တစ်ခုဖြစ်သည်။ မှ 30 အထိအားလုံးချင်း, လူပျို cable ကိုရရှိနိုင်ပါသည် "အချင်း 48 အထိနှစ်ဆ" အချင်းနှင့်အထက်သုံးဆ။ Snaphooks ပလပ်စတစ်, သံမဏိအတွင်း 36 "စင်တာများနှင့်ရရှိနိုင်အပေါ်လှပတဲ့နေကြသည်။ Cable ကိုသွပ်ရည်စိမ်, သံမဏိအတွင်းရရှိနိုင်ပါသည်, ဗီနိုင်း coated ။ အဆိုပါစနစ်သည်တစ်ကေဘယ်လ် (3/16 "အချင်း), turnbuckle, eyebolts နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးညှပ်ပါဝင်ပါသည်။
ခ) Halo ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား:
နယူး Halo တင်းမာမှုရပ်ဆိုင်းမှုစနစ် (HTS) သည်လေထုကိုင်တွယ်မှုစနစ်ချွတ်အခါဖောင်းခံရရန်သင့် FlowCon ပျံ့စနစ်၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်ကိုပေးသည်။ ဒီ option Airflow မရှိဘဲမြင့်တက်ကြည့် FlowCon ပျံ့စောင့်ရှောက်ဖို့ရိုးရှင်းတဲ့တဦးတည်းအတန်း cable ကိုရပ်ဆိုင်းမှုသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်း HD ကိုရထားလမ်းနှင့်အတူသုံးနိုင်တယ်။ အချင်း "36" 10 ကနေကန့်သတ်, ဒီ option ကို Deflation ပျံ့လက်ကိုဆင်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာ application များအတွက်စုံလင်သည်။ ကဏ္ဍများကိုအလွယ်တကူချယူနှင့်မျှမတို့အပိုအလုပျသမားမြားနှငျ့ဆေးကြောနိုင်ပါတယ်။ components စံတစျခုအတန်းတင်းမာမှု cable သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ HD ကိုတစ်ခုတည်းရထားလမ်းစနစ်ကပါဝင်သည်။
ဂ) HD ကိုရထား:
နယူး HD ကိုလူမီနီယံရထားလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရီမီယံရထားလမ်းစနစ် anodized ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ FlowCon ထည်ပျံ့စနစ်ပြောင်မြောက်ချောမွေ့ကြည့်။ အားလုံးချင်း, မှ 30 အထိလူပျိုရထားလမ်းများအတွက်ရရှိနိုင် "အချင်း 48 အထိနှစ်ဆ" အချင်းနှင့်အထက်သုံးဆ။ စက်မဲ့လေယာဉ်ပလပ်စတစ်အတွက် 36 "စင်တာများနှင့်ရရှိနိုင်အပေါ်လှပတဲ့နေကြသည်။ အဆိုပါစနစ်အား HD ကိုရထားလမ်း, ရထားလမ်းအထောက်အပံ့များ, couplers နှင့်ဒေါင်လိုက်အထောက်အကူ (မြန်နှုန်းလင့်များ) ပါဝင်သည်။ Radius ကိုကွေးတံတောင်ဆစ်ချင်းဝက်တွေ့ဆုံရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယခင်: China Wholesale 102mm 4" Red Flexible Silicone Turbo Air Intake Pipe Hose Automotive Air Duct 4m
နောက်တစ်ခု: micro Flow အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
Air ကို Blower ပိုက်လုံး
Air လေကြောင်းလိုင်းက Canvas ပိုက်လုံး
Air ကိုလေဝင်လေထွက် Flexible ပိုက်လုံး
ဖုန် Extraction ပိုက်လုံး
ပြပွဲ Center ကအထည်အလိပ်လေပိုက်လုံး
ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်သက်သေပြချက် Flexible ပိုက်လုံး
မီးသတ်ကိုခံနိုင်ရည် Flexible ပိုက်လုံး
Flexible Air ကိုပြွန်
Flexible Hvac ပြွန်
အငွေ့ Extraction Flexible ပိုက်လုံး
တစ်ဝက်က Round Hvac ပိုက်လုံး
Hvac insulator တွင်လည်းပိုက်လုံး
insulator တွင်လည်း Flexible လေပိုက်လုံး
insulator တွင်လည်း Flexible အပေါက်တွေပိုက်လုံး
ဖောက်ထား Flexible ပိုက်လုံး
Rectangular Flexible ပိုက်လုံး
က Round လေပိုက်လုံး
က Round Air ကိုပြွန်
က Round အထည်အလိပ် Air ကိုပြွန်
က Round Flexible Air ကိုပြွန်
round Hvac ပိုက်လုံး
Semi က Round အထည်အလိပ်ပိုက်လုံး
Semi က Round အထည်အလိပ်ပြွန်
ချည်မျှင် Flexible ပိုက်လုံး
Thermal ပြီးတော့ Acoustic ပိုက်လုံး
လေဝင်လေထွက် Flexible ပိုက်လုံး